Communication Cables & Equipment
HIGH CAPACITY AIR COOLER
<p>Unicode</p><p>Ionization and Ice Crystal Cooling Technology</p><p><br></p><p>ဤ High Capacity Air Cooler တှငျအလှနျအားကောငျးသော မျောတာစနဈရှိသညျ။အလိုအလြှောကျ လယေကျမြား (Swing) မြားမှအဆငျ့ 4000m³/h နှုနျး လထှေကျပါသညျ။ ရေ ၃၀လီတာ ဆနျ့ပွီး ၁၈နာရီအထိ Timer ပေးထားနိုငျသညျ။ Ionization and Ice crystal cooling နညျးပညာကို အသုံးပွုထားသောကွောငျ့ သာမနျထကျပို၍ အခြိနျကွာကွာ ပိုအေးစသေညျ။</p><p><br></p><p>Compact and Portable</p><p><br></p><p>ရှဘေီ့းမြားသညျ ၃၆၀ ဒီဂရီ လှညျ့နိုငျသညျ။ သိပျသညျးကဈြလဈပွီး Ergonomic ဒီဇိုငျးလညျးဖွဈသညျ။ဤ Air Cooler ကို ပေါ့ပါး၍ အလှယျတကူသယျဆောငျနိုငျအောငျ ပုံစံထုတျလုပျထားသညျ။ မညျသညျ့နရောတှငျထားသညျ့ဖွဈစေ အလိုအလြှောကျ လယေကျမြား (Swing) ကွောငျ့ လသေညျ နရောအနှံ့သို့ ပုံမှနျရောကျရှိစပေါသညျ။&nbsp;</p><p><br></p><p>• Rated Voltage : 220V-240V</p><p><br></p><p>• Rate Frequency : 50-60Hz</p><p><br></p><p>• Rated Power : 180 W</p><p><br></p><p>• Water Tank Capacity : 30 Liter</p><p><br></p><p>• Airflow Speed : 4000m³/h</p><p><br></p><p>• Technology : Ice Crystal Cooling Technology</p><p><br></p><p>• Product Features : 3-Speed Airflow Control, Ionization Function, 18-Hour Timer Control, Automatic Swinging Louvers, Front Swivel Casters, Water Level Indicator, Multiple Fan Modes, Digital Touch Control Panel with Remote Control&nbsp;</p><p><br></p><p>• Net Weight : 14.4 Kg</p><p><br></p><p>• Gross Weight : 16.4 Kg</p><p><br></p><p>• Product Dimension : 430 x 350 x 1180 mm</p><p><br></p><p>• Package Dimension : 470 x 380 x 1230 mm</p><div>Zawgyi</div><div><div>Ionization and Ice Crystal Cooling Technology</div><div>ဤ High Capacity Air Cooler တြင်အလြန်အားကောင်းသော မ္တောာစနစ်ရွိသည်။အလိုအေလွ်ာက် လေယက္မ်ား (Swing) မ်ားမွအဆင့် 4000m³/h နှုန်း လေထြက္ပါသည်။ ရေ ၃၀လီတာ ဆန့်ျပီး ၁၈နာရီအထိ Timer ပေးထားနိုင်သည်။ Ionization and Ice crystal cooling နည်းပညာကို အသုံျးပုထားသောကြောင့် သာမန္ထက္ပို၍ အခ်ိန်ကြာကြာ ပိုအေးစေသည်။</div><div>Compact and Portable</div><div>ရွေ့ ဘီးမ်ားသည် ၃၆၀ ဒီဂရီ လွည့်နိုင်သည်။ သိပ်သည်းက်စ္လစ်ျပီး Ergonomic ဒီဇိုင်းလည်ျးဖစ်သည်။ဤ Air Cooler ကို ပေါ့ပါး၍ အလြယ္တကူသယ်ဆောင္နိုင်အောင် ပုံစံထုတ္လုပ္ထားသည်။ မည်သည့်နေရာတြင္ထားသည့်ျဖစ်စေ အလိုအေလွ်ာက် လေယက္မ်ား (Swing) ကြောင့် လေသည် နေရာအနွံ့ သို့ ပုံမွန်ရောက်ရွိစေပါသည်။&nbsp;</div><div><div>• Rated Voltage : 220V-240V</div><div>• Rate Frequency : 50-60Hz</div><div>• Rated Power : 180 W</div><div>• Water Tank Capacity : 30 Liter</div><div>• Airflow Speed : 4000m³/h</div><div>• Technology : Ice Crystal Cooling Technology</div><div>• Product Features : 3-Speed Airflow Control, Ionization Function, 18-Hour Timer Control, Automatic Swinging Louvers, Front Swivel Casters, Water Level Indicator, Multiple Fan Modes, Digital Touch Control Panel with Remote Control&nbsp;</div><div>• Net Weight : 14.4 Kg</div><div>• Gross Weight : 16.4 Kg</div><div>• Product Dimension : 430 x 350 x 1180 mm</div><div>• Package Dimension : 470 x 380 x 1230 mm</div></div></div>
PREMIUM BLADELESS AIR COOLER
<p>Bladeless Design</p><p>ဤ Premium Bladeless Air Cooler သညျ ခတျေမီ Bladeless ဒီဇိုငျးဖွဈသောကွောငျ့ အိမျတှငျးအသုံးပွုရနျ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈသညျ။မိသားစုတိုငျး အလှယျတကူ သုံးနိုငျသော Circular Outlet ပါရှိသောကွောငျ့ ကလေးငယျမြား</p><p>နှငျ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးမြားအတှကျလညျး ဘေးအန်တရာယျ ကငျးရှငျးစပေါသညျ။</p><p>New Volute Air Duct System</p><p>Submersible volute air duct system သညျ လကေို 2.5cm ကယျြဝနျးသော outlet မှတဆငျ့ နရောအနှံ့ရောကျရှိစသေညျ့</p><p>အပွငျ ပိုမို၍ သကျသောငျ့သကျသာရှိစပေါသညျ။ ၃၆၀ ဒီဂရီအထိ လကေို ရရှိ/ရောကျရှိနိုငျအောငျ ပုံစံ ထုတျလုပျထားသညျ။</p><p>Digital Touch Control Panel&nbsp;<br></p><p>ဤ Air Cooler ၏ မြားပွားလှသော Featureမြားကို Digital Touch Control Panel မှ စီမံထိနျးခြုပျနိုငျသကဲ့သို့၆ မီတာ အကှာမှ Remote Control ဖွငျ့လညျးထိနျးခြုပျနိုငျပါသညျ။ လတေိုကျနှုနျး (Speed) ၃မြိုး၊ လအေမြိုးအစား ၃ မြိုး၊ Cool Mode ၊ လယေကျ (Swing Mode) နှငျ့ Timer စသညျ့ Functions မြားကို လှယျလှယျကူကူ လိုအပျသလို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။</p><p><br></p><p>• Rated Voltage : 220V-240V</p><p>• Rate Frequency : 50-60Hz</p><p>• Rated Power : 110 W</p><p>• Water Tank Capacity :6Liter</p><p>• Airflow Speed : 1200m³/h</p><p>• Technology : Ice Crystal Cooling Technology</p><p>• Product Features : 360-Degree Turbine Wind Channel, New Volute Air Duct System, Bladeless Design, 3-Speed Airflow Control, Multiple Fan Modes, 8-Hour Timer Control, Detachable 6-Litre Water Tank, Water Level Indicator</p><p>• Net Weight : 5.65 Kg</p><p>• Gross Weight : 7.45 Kg</p><p>• Product Dimension : 320 x 220 x 817 mm</p><p>• Package Dimension : 320 x 266 x 865 mm</p><p>Unicode</p><p>Bladeless Design</p><p>ဤ Premium Bladeless Air Cooler သည် ခေတ်မီ Bladeless ဒီဇိုင်းဖြစ်သောကြောင့် အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။မိသားစုတိုင်း အလွယ်တကူ သုံးနိုင်သော Circular Outlet ပါရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များ</p><p>နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးများအတွက်လည်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေပါသည်။</p><p>New Volute Air Duct System</p><p>Submersible volute air duct system သည် လေကို 2.5cm ကျယ်ဝန်းသော outlet မှတဆင့် နေရာအနှံ့ ရောက်ရှိစေသည့်</p><p>အပြင် ပိုမို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီအထိ လေကို ရရှိ/ရောက်ရှိနိုင်အောင် ပုံစံ ထုတ်လုပ်ထားသည်။</p><p>Digital Touch Control Panel&nbsp;<br></p><p>ဤ Air Cooler ၏ များပြားလှသော Featureများကို Digital Touch Control Panel မှ စီမံထိန်းချုပ်နိုင်သကဲ့သို့ ၆ မီတာ အကွာမှ Remote Control ဖြင့်လည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ လေတိုက်နှုန်း (Speed) ၃မျိုး၊ လေအမျိုးအစား ၃ မျိုး၊ Cool Mode ၊ လေယက် (Swing Mode) နှင့် Timer စသည့် Functions များကို လွယ်လွယ်ကူကူ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p><br></p><p>• Rated Voltage : 220V-240V</p><p>• Rate Frequency : 50-60Hz</p><p>• Rated Power : 110 W</p><p>• Water Tank Capacity :6Liter</p><p>• Airflow Speed : 1200m³/h</p><p>• Technology : Ice Crystal Cooling Technology</p><p>• Product Features : 360-Degree Turbine Wind Channel, New Volute Air Duct System, Bladeless Design, 3-Speed Airflow Control, Multiple Fan Modes, 8-Hour Timer Control, Detachable 6-Litre Water Tank, Water Level Indicator</p><p>• Net Weight : 5.65 Kg</p><p>• Gross Weight : 7.45 Kg</p><p>• Product Dimension : 320 x 220 x 817 mm</p><p>• Package Dimension : 320 x 266 x 865 mm</p><p>PREMIUMBLADELESSAIRCOOLER<br></p>
PREMIUM AIR COOLER
<p>Unicode</p><p>360-Degree Crystal Cool Air&nbsp;</p><p>ဤ Premium Air Cooler တှငျ Ice Crystal Cooling နညျးပညာကို အသုံးပွုထားသညျ။ ပတျဝနျးကငျြကို ပိုမိုအေးမွ</p><p>စရေနျ နညျးပညားအသဈ ECO Curtain Fiber ကိုလညျးထညျ့သှငျးအသုံးပွုထားပါသညျ။ လကေို ၃၆၀ ဒီဂရီအထိ ရရှိ/ရောကျ</p><p>ရှိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျသော မျောတာပါရှိသညျ့အပွငျ လလေညျပတျမှုကိုလညျး အမွဲတညျငွိမျစသေညျ။</p><p>LCD Digital Touch Control Panel&nbsp;</p><p>Air Cooler အလယျဗဟိုတှငျပါရှိသော LCD Digital Control Panel မှတဆငျ့ Function မြားကို ထိနျးခြုပျနိုငျသညျ။ ။ လတေိုကျနှုနျး (Speed) ၃မြိုး၊ လအေမြိုးအစား ၃ မြိုး၊ Lighting၊ Cool Mode ၊ လယေကျ (Swing Mode) နှငျ့ Timer စသညျ့ Functions မြားကို Remote Control သို့မဟုတျ Touch System ဖွငျ့ လှယျလှယျကူကူ လိုအပျသလို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။</p><p>Compact and Portable</p><p>ဤ Premium Air Cooler ကို Function စုံလငျအောငျ၊ သိပျသညျးကဈြလဈမှုရှိအောငျ နှငျ့ အသုံးပွုရလှယျကူအောငျ ပုံစံထုတျလုပျထားသညျ။ သယျဆောငျရလှယျကူစရေနျ ရှဘေီ့းမြားကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှညျ့နိုငျအောငျ ပွုလုပျပေးထားပွီး ထပျမံ Installation ပွုလုပျရနျမလိုအပျပါ။</p><p>• Rated Voltage : 220V-240V</p><p>• Rate Frequency : 50-60Hz</p><p>• Rated Power : 110 W</p><p>• Water Tank Capacity : 8 Liter</p><p>• Airflow Speed : 1800m³/h</p><p>• Technology : Ice Crystal Cooling Technology</p><p>• Product Features : 360-Degree Turbine Wind Channel, LCD Digital Touch Control Panel, 3-Speed Airflow Control, Multiple Fan Modes, 8-Hour Timer Control, Detachable 8-Litre Water Tank, Water Level Indicator, Front Swivel Casters, Remote control</p><p>• Net Weight : 7.50 Kg</p><p>• Gross Weight : 11 Kg</p><p>• Product Dimension : 382 x 290 x 954 mm</p><p>• Package Dimension : 402 x 310 x 984 mm</p><p>Zawgyi</p><p>360-Degree Crystal Cool Air&nbsp;</p><p>ဤ Premium Air Cooler တွင် Ice Crystal Cooling နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုအေးမြ</p><p>စေရန် နည်းပညားအသစ် ECO Curtain Fiber ကိုလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါသည်။ လေကို ၃၆၀ ဒီဂရီအထိ ရရှိ/ရောက်</p><p>ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သော မော်တာပါရှိသည့်အပြင် လေလည်ပတ်မှုကိုလည်း အမြဲတည်ငြိမ်စေသည်။</p><p>LCD Digital Touch Control Panel&nbsp;</p><p>Air Cooler အလယ်ဗဟိုတွင်ပါရှိသော LCD Digital Control Panel မှတဆင့် Function များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ။ လေတိုက်နှုန်း (Speed) ၃မျိုး၊ လေအမျိုးအစား ၃ မျိုး၊ Lighting၊ Cool Mode ၊ လေယက် (Swing Mode) နှင့် Timer စသည့် Functions များကို Remote Control သို့မဟုတ် Touch System ဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>Compact and Portable</p><p>ဤ Premium Air Cooler ကို Function စုံလင်အောင်၊ သိပ်သည်းကျစ်လစ်မှုရှိအောင် နှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် ပုံစံထုတ်လုပ်ထားသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန် ရှေ့ဘီးများကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ထပ်မံ Installation ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။</p><p>• Rated Voltage : 220V-240V</p><p>• Rate Frequency : 50-60Hz</p><p>• Rated Power : 110 W</p><p>• Water Tank Capacity : 8 Liter</p><p>• Airflow Speed : 1800m³/h</p><p>• Technology : Ice Crystal Cooling Technology</p><p>• Product Features : 360-Degree Turbine Wind Channel, LCD Digital Touch Control Panel, 3-Speed Airflow Control, Multiple Fan Modes, 8-Hour Timer Control, Detachable 8-Litre Water Tank, Water Level Indicator, Front Swivel Casters, Remote control</p><p>• Net Weight : 7.50 Kg</p><p>• Gross Weight : 11 Kg</p><p>• Product Dimension : 382 x 290 x 954 mm</p><p>• Package Dimension : 402 x 310 x 984 mm</p><div><br></div>
<p>Unicode</p><p>3 Temperatures for All Your Needs</p><p>ဤ Water Dispenser သညျ Functions စုံလငျပွီး အပူခြိနျ ၃ မြိုး (အပူ၊ အအေး၊ သာမနျ) ပါဝငျသညျ့ High Capacity Water Dispenser ဖွဈသညျ။ ကလေးငယျမြားအပူလောငျခွငျးမှ ကာကှယျရနျ Hot Tap တှငျ Child-safe Lock ပါရှိပါသညျ။ သနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျရနျ အလှယျတကူ ဖွုတျ/တပျနိုငျပွီး ဖိတျစငျမှုမရှိသော အောကျခံအပွားငယျ (Drip Tray) လညျးပါဝငျသညျ။</p><p>High Capacity Rapid Heating/Cooling</p><p>ဤ Water Dispenser ၏ ရထေညျ့ကနျကို အဆငျ့မွငျ့ စတီးလျစဈဖွငျ့ ပွုလုပျထားပွီး ရဘေူးကို မွနျမွနျဆနျဆနျနှငျ့အလှယျတကူ လဲလှယျနိုငျရနျအတှကျ စပျကွောငျးမပါသော Top-load ပုံစံဖွငျ့ ထုတျလုပျထားသညျ။ ရပေူ ၅ လီတာ၊ ရအေေး ၂ လီတာ ဆံ့သောကွောငျ့ ရပေူ/ရအေေး ရရှိရနျ အခြိနျအကွာကွီး&nbsp; စောငျ့ရနျမလိုပါ။</p><p><br></p><p>12-Litre Refrigerator with U-shaped Fresh Cabinet</p><p>ဤ Water Dispenser တှငျ Build-in Temperature (0-10°C) 13-litre Refrigerator ပါရှိသဖွငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနှငျ့ စားစရာမြားကို အေးမွစသေညျ။ အင်ျဂလိပျအက်ခရာ U ပုံသဏ်ဍနျ အခနျးငယျလေးတဈခုပါဝငျသဖွငျ့ သဈသီးမြားနှငျ့ အခွားသော စားစရာမြားကို လတျဆတျစပေါသညျ။ ကွာရှညျအသုံးခံနိုငျပွီး သဘာပတျဝနျးကငျြထိခိုကျမှုလညျး မရှိပါ။</p><p>• Rated Voltage : 220V-240</p><p>• Rate Frequency : 50-60Hz</p><p>• Noise : &lt;50dBA</p><p>• Cooling Power : 110W</p><p>• Heating Power : 580W</p><p>• Cooling rate current : 0.7A</p><p>• Cooling capability : ≥1.5L/h, 5-10℃</p><p>• Heating capability : ≥5L/h, 85-95℃</p><p>• Refrigerant : R134a/45g Compressor Cooling</p><p>• Cold Tank Capacity : 3.3 Liter</p><p>• Cold Tank Material : Seamless 304 Stainless Steel</p><p>• Product Features : 3Temperatures: Hot, normal and cold water, Efficient Press Taps</p><p>Safety Child Lock, Led Light Display, 12-Litre Refrigerator (0-10°C) with U-shaped Fresh Cabinet</p><p>• Net Weight : 15.3 Kg</p><p>• Gross Weight : 16.9 Kg</p><p>• Product Dimension : 310 x 340 x 1050 mm</p><p>• Package Dimension : 330 x 360 x 1080 mm</p><p>Zawgyi</p><p>3 Temperatures for All Your Needs</p><p>ဤ Water Dispenser သည် Functions စုံလင်ပြီး အပူချိန် ၃ မျိုး (အပူ၊ အအေး၊ သာမန်) ပါဝင်သည့် High Capacity Water Dispenser ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များအပူလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Hot Tap တွင် Child-safe Lock ပါရှိပါသည်။ သန့် ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရန် အလွယ်တကူ ဖြုတ်/တပ်နိုင်ပြီး ဖိတ်စင်မှုမရှိသော အောက်ခံအပြားငယ် (Drip Tray) လည်းပါဝင်သည်။</p><p>High Capacity Rapid Heating/Cooling</p><p>ဤ Water Dispenser ၏ ရေထည့်ကန်ကို အဆင့်မြင့် စတီးလ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ရေဘူးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အလွယ်တကူ လဲလှယ်နိုင်ရန်အတွက် စပ်ကြောင်းမပါသော Top-load ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ရေပူ ၅ လီတာ၊ ရေအေး ၂ လီတာ ဆံ့သောကြောင့် ရေပူ/ရေအေး ရရှိရန် အချိန်အကြာကြီး&nbsp; စောင့်ရန်မလိုပါ။</p><p><br></p><p>12-Litre Refrigerator with U-shaped Fresh Cabinet</p><p>ဤ Water Dispenser တွင် Build-in Temperature (0-10°C) 13-litre Refrigerator ပါရှိသဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် စားစရာများကို အေးမြစေသည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ U ပုံသဏ္ဍန် အခန်းငယ်လေးတစ်ခုပါဝင်သဖြင့် သစ်သီးများနှင့် အခြားသော စားစရာများကို လတ်ဆတ်စေပါသည်။ ကြာရှည်အသုံးခံနိုင်ပြီး သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလည်း မရှိပါ။</p><p>• Rated Voltage : 220V-240</p><p>• Rate Frequency : 50-60Hz</p><p>• Noise : &lt;50dBA</p><p>• Cooling Power : 110W</p><p>• Heating Power : 580W</p><p>• Cooling rate current : 0.7A</p><p>• Cooling capability : ≥1.5L/h, 5-10℃</p><p>• Heating capability : ≥5L/h, 85-95℃</p><p>• Refrigerant : R134a/45g Compressor Cooling</p><p>• Cold Tank Capacity : 3.3 Liter</p><p>• Cold Tank Material : Seamless 304 Stainless Steel</p><p>• Product Features : 3Temperatures: Hot, normal and cold water, Efficient Press Taps</p><p>Safety Child Lock, Led Light Display, 12-Litre Refrigerator (0-10°C) with U-shaped Fresh Cabinet</p><p>• Net Weight : 15.3 Kg</p><p>• Gross Weight : 16.9 Kg</p><p>• Product Dimension : 310 x 340 x 1050 mm</p><p>• Package Dimension : 330 x 360 x 1080 mm</p>
Deluxe Non-Inverter Air Conditioner 1.0HP
Panasonic Deluxe Non-Inverter Air Conditioner သည် အခန်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုနည်၊း များ နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ချွေတာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။လေထုထဲရှိ ဖုန်မှုန့်အညစ်အကြေးများနှင့်မှိုများသာမက PM2.5 ထက်သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများကို ၉၉%ထိဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။စတင်အသုံးပြုချိန်မှစ၍သာမာန်လေအေးပေးစက်များထက် ၁၅%ပိုမိုလျှင်မြန်စွာပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
Commercial air con Air curtain အဲကွန်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပူနွေးလာမှုကြောင့် လူတော်တော်များများ အပူဒဏ်ကို ခံစားနေရပါတယ်။ အပူရှိန်မြင့်တတ်လာမှုကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကျန်းမာရေးအရ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ခန္ဓာကိုယ်မှ ခုခံအားများ လျှော့နည်းလာပါတယ်။ အခုလို ခုခံအား လျှော့နည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကြားခံ ခုခံအားအဖြစ် အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးမယ့် GREE Aircon ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးငယ်များအတွက် ရာသီဥတု အပူချိန်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။ GREE Aircon သည် ပူလောင်အိုက်စက်တဲ့ အခန်းထဲမှလေတွေကို ဖယ်ရှားပြီး အေးမြလက်ဆတ်သော လေးအေးများကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးတဲ့အတွက် အခန်းထဲသို ဝင်လာတဲ့လူတိုင်းအတွက် စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ပူနေပေမယ့် အခန်းထဲမှာ အေးချမ်းနေမယ်ဆိုရင် လူကြီးများအတွက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သည် တရားစာအုပ်ဖက်မယ်၊ တရားနာမယ်၊ တရားအားထုတ်မယ် ဆိုရင်လည်း အခုလိုအေးချမ်းအခန်းထဲမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်တည်ငြိမ်စွားဖြင့် တရားအားထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ GREE Aircon သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ပူလောင်မှုကို ကင်းဝေးစေပြီး အေးချမ်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
More fridge or freezer space on demandThe FlexZone™ offers the ultimate in food storage flexibility, so everything stays fresher. With one touch the compartment can be easily converted from fridge to freezer using four pre-set temperature settings. Air-conditioner, Refrigerator, Washing Machine Brand မျိုးးစုံကို ရောင်းဝယ်ခြင်း၊တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ဆေးကြောခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။Cold Storage များ တည်ဆောက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊Air con Model နိမ့်နှင့်အမြင့်လဲလှယ်ခြင်း စသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိကျမှန်ကန်စွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
မျက်နှာကျက်တွင် မြှုပ်နှံ၍ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် နေရာစားသက်သာပါသည်။ အခန်းအတွင်းရှိ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချပေးခြင်း၊ လေထုကို သန့်စင်ပေးခြင်း၊ လေထုထဲရှိ ပိုးမွှားများနှင့် ဖုန်မှုန်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အအေးနှုန်းမြန်ဆန်သောကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သက်သာစေပါသည်။ သာမန်ထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ လေလည်ပတ်သောကြောင့် အခန်းအတွင်း အပူချိန်ကို မြန်ဆန်စွာ လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး အေးမြမှုကို အလျင်အမြန်ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ Gree မှ လေအေးပေးစက်များကို အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းသောလေထုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရှုရှိုက်လိုက်ပါ။
Heat recovery units can heat and cool spaces simultaneously. YORK® VRF heat recovery units offer an extended operating temperature range: outdoor ambient temperature as low as 14° F (-10° C) in the cooling mode and as low as -4° F (-20° C) in the heating mode. Long refrigerant piping lengths – up to 3,281 feet total pipe run. Advanced defrost cycle operation in the heating mode. Able to operate up to 64 indoor units onasingle piping network. Power-saving demand control for reduced peak load and energy savings. Automatic judgment system for Refrigerant Amount to verify refrigerant charge is correct. Diagnostics and malfunction codes available at push ofacontrol panel button.
York Window Type Air Conditioners
The York Window Type Air Conditioners is an improved cooling solution for stronger and faster air circulation. The York Window Type Air Conditioners for residential and commercial properties is available from L&amp;L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
LG Mosquito Away Air Conditioner ခြင်ပြေးလေအေးပေးစက်
LG Mosquito Away Air Conditioner ဟာဆိုရင် သင့်မိသားစုကို ခြင်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုပြီး ခြင်ပြေးစေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ နှုန်းလွန်အသံလှိုင်းကိုသာအသုံးပြုပြီး ခြင်များကို ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် LG Mosquito Away Inverter Air-con တွေကို အသုံးပြုပြီး ခြင်အန္တရယ်ကင်းဝေးစေပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Smile Electronic Sales &amp; Service မှ Air Con Brand 10မျိုးကျော် အတွက် ပစ္စည်းကောဈေးနှုန်းပါ အာမခံပါသည်။ Smile Electronic ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ၂၄နာရီအတွင်း အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ...ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
The York Bio Shield J-series air-conditioners are non-inverters air conds available in 1.0hp to 2.5hp, depending on the model. This is the York Bio Shield technology model, suitable for any homes, offices or workplace, available from L&amp;L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
The York Prestige Ceiling Type air-conditioners are available in 2.0hp to 2.8hp, depending on the model. The York Prestige Ceiling Type air-conditioner model, the smart choice for pleasure or business, available from L&amp;L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
York Ceiling Cassette Type A &amp; C – Air Surround
The York Ceiling Cassette Type A &amp; C – Air Surround air-conditioners are available in 1.0hp to 5.0hp, depending on the model. The York Ceiling Cassette Type A &amp; C air-conditioner model, the smart choice for residential and commercial properties, available from L&amp;L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
Myanmar 's largest B2B marketplace for Communication,Electrical and Electronics products in Myanmar. You can buy and sell computer,aircon,automatic instruments,cctv,security camera,wireless instrument,network equipment,fiber optic equipment,communication cable in Myanmar. You can order from online or just see information online and buy directly from their showroom.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories. Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.